गोसाइँकुण्ड आउने तीर्थालु घटे
धुन्चे, १५, साउन । धार्मिक, पर्यटकीय तथा ऐतिहाँसिक स्थल गोसाइँकुण्डमा दर्शन गर्न आउने तीर्थालुको संख्यामा कमी आएको छ । गोसाइँकुण्ड क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष सञ्जीब डिएमका अनुसार यस वर्ष लगभग तीन हजारको संख्यामा तीर्थालुहरू आएका छन् । गत वर्षहरूको तुलनामा यो संख्या निकै कम रहेको पनि उनले बताए ।
हिमबत खण्डमा पर्ने गोसाइँकुण्डमा विशेष गरी धार्मिक हिशावले वर्षमा दुई पटक मेला लाग्ने गर्दछ । केही समयदेखि वर्षैभरि तीर्थालु आउने र यसवर्ष जनैपूर्णिमाका दिन ग्रहण लाग्ने भएकोले नागपञ्चमीकै दिनमा नै रक्षाबन्धन गरिने भएका कारण तीर्थालु घटेको अनुमान गरिएको छ ।
सत्ययुगमा देवता र दानव मिली समुन्द्र मथन गर्दा निष्केको हलाहल नामक कालकुट विष भगवान शिबजीले निल्नु भएको र सो डाहा शान्त गर्न हिमालय पर्वतको भ्रमण गरी यहाँ आई त्रिशूलले खोप्दा त्रिशूलधाराको उत्पत्ति भएको र सोही त्रिशूलधारबाट गोसाइँकुण्डको उत्पत्ति भएको धार्मिक कथन छ । यो कुण्डलाई महादेव कुण्ड वा शिवकुण्ड भनेर पनि भनिन्छ । मुख्यगरि गोसाइँकुण्ड चाहिँ हाल रहेको शिवकुण्ड भन्दा १ किमी माथि रहेको छ भनेर पनि भनिएको छ ।
गोसाइँकुण्डको मेला व्यवस्थापन गर्न वा तीर्थालुहरूलाई बासको व्यवस्थाका लागि गोसाइँकुण्ड परिसरमा ४ वटा स्थायी होटलहरू रहेका छन् । अस्थायी बासका लागि थर्पुको पनि व्यवस्था गरिँदै आएको छ । तीर्थालुको स्वास्थ्यपचारको सुविधालाई ध्यान दिँदै विभिन्न संघसंस्था र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले अस्थायी मेडिकलको पनि व्यवस्था गर्दै आएको पाईन्छ ।
वि.सं. २०६३ सालमा विश्व सम्पदा (रामसार) सूचिमा सूचिकृत गोसाइँकुण्डको महत्व धार्मिक हिशावले मात्र नभई जैविक विविधता र संरक्षणको हिशावले पनि बढ्दै गईरहेको छ । समुद्री सतहबाट ४३८५ मी. उचाईमा अवस्थित गोसाइँकुण्ड जानको लागि सदरमुकाम धुन्चेबाट २ दिनको पैदलयात्रामा पुग्न सकिन्छ ।